:Bọchị: Jenụwarị 9, 2020
Etu ahihia nke ulo iji mee ka Ọdụ ụgbọ njem nọ na Manisa
Site n'ibu nke mkpofu ahịhịa dị n'ụlọ gaa na mkpofu mkpofu Uloburun Solid na Landfill, nke a wetaara Manisa n'okpuru nduzi nke Cengiz Ergün, Onye Isi Obodo nke Manisa Obodo na ili obodo 40 afọ nke mkpofu ahịhịa. [More ...]
Bağbaşı Plateau Na-eji Ihe Nkiri Skiiki Emepụta Mpempe Akwụkwọ
Denizli Teleferik na Bağbaşı Plateau, nke ghọrọ otu n'ime agba dị mkpa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na Denizli, mepụta ọwa ozi nwere ọmarịcha snow. Dgbọala USB Denizli Cable na Denizli Cable Car [More ...]
Onye isi oche ahia ahia ahia nke Aksaray Hamit Özkök, Aksaray Chamber of Commerce and Industry Chairman Cüneyt Göktaş, Aksaray Commodity Exchange Onye isi oche Nurettin YAPCAN, Aksaray [More ...]
Minista Turhan, na ọgbakọ mkparịta ụka a na-akpọ Mesafe Distance and Goals kpuchie na Afọ 17 na Railways bynde nke General Directorate nke Turkish State Railways (TCDD), na-etolite ma na-agbanwe ebe niile dị ndụ nke akụrụngwa njem [More ...]
Ndị ọrụ nchekwa obodo Istanbul bụ ndị nyere nwa amaala ahụ aha ya bụ Oktay Sami, nke si Ünalan metro ọdụ gwara ndị uwe ojii ma duru Sami gaa n'ụlọ ndo nke IMM. Na mgbede Tuzde, Jenụwarị 7 ka ọ kụọ elekere 20:45 [More ...]
Kardemir Karabük Iron na Iron Industry na Trade Inc., Onye isi oche nke Board of Directors Mustafa Yolbulan, na 2020, kwuru na ihe ndị ga-ebute ụzọ ga-abụ itinye ego gburugburu ebe obibi. Na-ekwu na $ 50 nde nke itinye ego gburugburu ebe obibi na-aga n'ihu [More ...]
Ihe nri na ihe onunu na enye ihe nnochianya nke ndi Akçaray
Enwere ihe ohuru na Akçaray, nke ndị Izmit na-ahọrọ na njem. Kwa ụbọchị, ọtụtụ puku mmadụ na-eji igwe nri Ak bearay ihe oriri na ihe ọ beụ beụ ọçụ amalite. E debere otu n'ime igwe ịre ahịa na East Barracks Stop. automat [More ...]
Ọdụ Ọdụ Istanbul ga-eme echi
IMM ga-ahazi ihe omumu iji kpughee echiche nke ndi sayensi banyere Kanal Istanbul na iji nye ndi Istanbul ihe omuma. A ga-ekwu okwu mmeghe nke uloru a na Istanbul Congress Center echi. [More ...]
BTS na-arịọ ụgbọ ala n'etiti Diyarbakır na Batman
Onye isi ala BTS Diyarbakir Nusret Basmaci, Diyarbakir-Batman maka ndị njem na-agba ọsọ na nchekwa dị mma rịọrọ ka ha gafee okporo ụzọ. Dika akụkọ nke Toygar Kaya sitere na Evrensel; “United Transport Workers Union (BTS) Onye isi Ala Ala Diyarbakır [More ...]
Sisteko Njikọ AGT dị na Agenda nke Minista
Onye na-esote Mịnịsta nke ọrụ na teknụzụ Mehmet Fatih Kacır gara Mahadum Azụmaahịa Istanbul wee nata ozi sitere n'aka ndị isi ụgbọ njem na ngwa nyocha. Kacir, AGT metro sistemụ ga-ebute ebumnuche nke Mịnịstrị ahụ, ka o kwuru. [More ...]
Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa kwuru, ine Ugbo elu okporo ụzọ Ankara-Sivas dị ogologo na-aga n'ihu. [More ...]
Transportgbọ njem Turkish-Sen gbara ndị bi na Sivas ume ka ha kwuo TUDEMSAŞ
Ilker Celikus, Onye isi oche Turk Ulas-Sen Alaka, onye wetara ebubo na T thatDEMSAS ga-ejikọ TULOMSAS na TUVASAS, kwuru, sị: [More ...]
Oke Ski Oke Oke Nke Western Black Sea
Onye isi akwukwo okike nke gọọmentị Kastamonu Zafer Karahasan, "Ilgaz 2-Yurduntepe Ski Center, nke nwere kilomita 6 nwere ogologo mkpọda ugwu Western Western." Ọ sịrị. Mwube ahụ malitere na 2013, kilomita 6 [More ...]